Soo-saareyaasha Visual Visorsrs & Alaab-qeybiyeyaasha - Shiinaha Visual Scarers Factory
Cajalka Cabsida Shimbiraha BST-H
Cajaladda Cabsida Shimbiraha
Cajaladda celiya Holographic waxay u shaqaysaa sidii shimbir waji leh oo looga hortago. Cajaladdu waxay ku habboon tahay inay iska celiso shimbiraha iftiinka iyo buuqa, Cajaladdu waxay siisaa difaac dalagyada iyo miraha. Cabirka cajaladda cabsida leh: 2.5cm (1 inji) oo ballac ah, waxay caddaynaysaa xulasho wanaagsan oo lagu celinayo shimbiraha iyadoo loo marayo sanqadha iftiinka iyo dabaysha. Waxyaabaha: Ka samaysan waxyaabo aan sun ahayn, fudud, waxtar leh oo bey'adda u fiican, aragtida leysarka oo leh qaabka iris ayaa keenta saamayn sare si looga cabsado shimbiraha ka fog jardiinooyinkaaga, miraha, geedaha, dhirta iyo khudaarta.
Shimbiraha Daryeelka Shimbiraha BSB-01
Shimbiraha Daryeelka Shimbiraha
Waxay ka hortageysaa shimbiraha inay guryo ka sameystaan ​​gawaarida iyo meelaha doomaha lagu raaco, ama ku caweyso geedo midho leh! Ka ilaali stucco, dhinacyada, gawaarida, doomaha iyo jardiinooyinka ka soo baxa buulka, xaarka shimbiraha daxalaysta iyo noocyada kale ee waxyeelada shimbiraha. Dib u soo ceshtaan barxadaha iyo balakoonada oo waqti iyo lacag ku kaydi nadiifinta iyo dayactirka. Saddex midab.
Indhaha Indha-Cabsigelinta-Argagixisada TE-01
Kubad cabsi badan oo shimbireed leh, “Guuritaanka” indhaha holograafiga ah waxay raacaan dhammaan noocyada shimbiraha cayayaanka
Khiyaano ugaarsi ugaarsiga ah oo aad u macquul ah oo cabsi leh, Waxaa loo isticmaali karaa iyadoo lagu darayo kahortagga shimbiraha elektarooniga ah.
Shimbiraha Cudurka Duulista Hawada
Flying hawk kite wuxuu cabsi geliyaa shimbiraha cayayaanka ka soo gala dalagga. Xirmada buuxda waxay ka kooban tahay qaniinyo, fiber-ka muraayadda telescopic-ka iyo xarig
Cabirka tiirka telescopic: saamiga 6mx19mm ama saamiga 10m x28mm
Guumeeyaha Guumays DO-F1
Guumays guumays leh baalal duulaya: Khiyaano ugaarsi ugaadhsade. Qaybaha ku socda dabaysha waxay hagaajinayaan xaqiiqda firfircoon. Ku qasbi shimbiraha aan loo baahnayn iyo cayayaanka kale ee yaryar. Waxay tirtiraysaa nadiifinta iyo dayactirka la xiriira cayayaanka.
Cajalka Cabsida Shimbiraha BST-R
Cajaladda cabsida leh ee shimbiraha ka muuqata: Labada dhinacba waxay ka tarjumaysaa cajaladda cabsida cabbirka mihnadlaha ah ee cajaladda culus ee la heli karo, tayo sare leh oo ay adeegsadaan beeralayda xirfadleyda ah, oo loo adeegsaday boqollaal hektar oo beero canab ah iyo beero canab ah.